Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Latsaina indray ny vahoaka !
Inty sy Nday: Latsaina indray ny vahoaka !
Mitana anjara toerana goavana eo amin’ny fiainana ara-piaraha-monina andavanandro ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao. Noho ny fahafantaran’ny any ivelany an’izany no mahatonga ny sasany any hamoromporona zavatra tsy azo inoan’ny saina ny fahamarinany, nefa dia tsy vitsy ireo avy dia manao teli-moka azy ireny ka manaiky azy.
Dia manana toe-tsaina tsy mifanalavitra amin’izany koa ny any ampita any. Asa na iza na zovy ny tompon’anadraiki-panjakana Malagasy nanao laza masaka na nampiseho antontan-taratasy tany ampita tany na iza fa malaza be any Eraopa sy any Etazonia any hono fa “lasa lavitra ary voalohany mihitsy sady fitaratra (modely) i Madagasikara amin’izany fanavaozana ny fizakan-tany izany”.
Dia misy mihitsy ny solontenan’ny fitondram-panjakana, miaraka amin’ireo teknisianina aavy eo anivon’ny sampan-draharaha misahana ny fananan-tany no nalefa mandray anjara amin’ny dinika any Washington any Etazonia, ka io tontolon’ny fanavaozana ny fananan-tany (reforme foncière) io no fototry ny dinika any. Ô ry vahoaka Malagasy ô ! Fa azon’inona ny sehatra iraisam-pirenena no minomino foana toa izany? Sa tetika hihazakazahana aty Madagasikara izany mba hangoronaa ny tany eto dia miverina ho toy ny tamin’ny andron’ny fanjanahantany ny eto ? Izany hoe ho lasan’ny vahiny avokoa indray ireo velaran-tany midadasika mahavokatra sy tany misy harena ankibon’ny tany eto ?
Isika olom-pirenena tsotra dia mahita, ary tsy zavatra mandalo fa mitranga saika isanandro eo anivon’ny fiaraha-monina misy antsika fa raha misy raharaha ifanolanan’ny karazan’olona maro eto Madagasikara izao dia ity resaka fananan-tany ity. Manomboka amin’ny mpiray tampo, ny mpianaka, ny mpiray lova, ny mpifanolo-bodirindrina, ny mpiray fokontany, ny mpiray kaominina…. Ary eo, koa ny fanararaotan’ny manam-pahefana sasany, na ny any amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany na ny any amin’ny Fitsarana any, izay mitsikombakomba amin’ny resaka kolikoly, ka manome taratasy ara-panjakana olona tsy fantatra nandritra ny naha-tany ny tany teo amin’ny toerana iray, nefa lasa tompony, hono, satria nahazo taratasy ara-panjakana. Hatramin’ny vahiny no mahavariana fa mahasahy mandroaka ny Malagasy amin’ny toerana izay nohajarian’ny razambeny efa ho 150 taona, miaraka amin’ny fasana sy ny tranon-drazana, ny fiangonana sy trano sekoly, tanety sy tanimbary midadasika…. Izany rehetra izany no voafaritra ho fananan’olona tokana tampoka, Malagasy na vahiny, dia mahasahy maka mpitandro ny filaminaa hampihatra ny didim-pitsarana na ny taratasy avy amin’ny fananan-tany. Dia voaroaka ny tena tompon-tany ary fongana hatramin’ny fasana ilevenana.
Izany no mitranga amin’izao fotoana, tato anatin’ny 20 taona farany no niroboroboan’ny raharaha maloto toa izany. Tranga iray azo anaporofoana an’izany koa ange, ohatra, ny afitsoky ny mpanjanatany Monloup eny Tanjombato amin’ny tanin’ny Malagasy e ! Isan’ny tratran’izany, ohatra, ny orin’asa fanaovana ity La Gazette de la Grande Ile ity.
Nandrafitra rijan-tenin-dalàna indray ankehitriny ny fitondrana Hvm mba hanarenana ny lesoka, hono, momba izany tontolon’ny fananan-tany izany. Nefa dia vao mainka hanome vahana ny kolikoly sy ny firaisana tsikombakomba maloto, ary mbola hampiroborobo ny fifanolanaa mety hiteraka korontana tsy hifankahitana eo anivon’ny fiaraha-monina malagasy mihitsy. Dia izany vo no holazaina fa « filamatra » sy « fitaratra » ny eto Madagasikara ? Fandatsana ny vahoaka izany fa resabe ny ankoatra izany e !